Sebenzisa ngokugcwele umatilasi oqinile wentwasahlobo ukuze uthuthukise ibhizinisi lakho | Rayson
Sebenzisa ngokugcwele umatilasi oqinile wentwasahlobo ukuze uthuthukise ibhizinisi lakho
I-Sony \_ 'S Bravia S Series HD TV inezinto ezintathu ze-HDMI kanye ne-coaxial s-video, ikhompyutha, umsindo we-analog, ividiyo ye-analog, ividiyo yokwenziwa, nevidiyo yokwenziwa. Le ncazelo ephezulu ye-TV idlula inkanyezi yamandla 3. 0 izidingo. Ibuye ihambisane nesixhumanisi saseBravia, ikuvumela ukuthi uxhume imodyuli ehlukile ye-Bravia Link ku-HDTV. I-Samsung 7-Series LCD HDTV inikeza izici ezinhle ngamanani ashibhile.
Ngakho-ke, ake sikukhombise amavidiyo athile aqhubeka lapha manje. Ezinsukwini ezintathu ezedlule, babone imvula eningi kunalokho abavame ukungena ngenyanga. Idolobha limemezele isimo esiphuthumayo futhi sizobona imvula eningi ezinsukwini ezimbalwa ezizayo zemigwaqo futhi ichithe / icekele phansi izindlu.
Sicela uqhubeke nombuzo wakho. Sawubona, manene, uKenneth Zena. Sawubona, uKen. Amanani amanani amanani kaKenneth Zeneryour ayasiza futhi abonakale njengokuthatha isitatimende esibonisa isitatimende se-Fed. Ngakho-ke kufanele sizame futhi. UMichael noJeff, usebenzise amagama ahlukile. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi yini okushilo manje ukushesha kokuhlanganiswa kwentengo, uMichael.